पोखरा ५ मा सिकाईबारे सचेतना | NepalDut
पोखरा ५ मा सिकाईबारे सचेतना
पोखरा ५ का बालबालिकाको सिकाई, अध्ययन र सर्वाङ्गीणबारे सचेतना कार्यक्रम भएको छ । पोखरा वडा नं. ५ कार्यालय र मन्टेसरी एसोसियसन कास्कीको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
पोखरा ५ का मन्टेसरी, अन्य विद्यालय, अभिभावक र शिक्षक कार्यक्रममा सहभागी थिए । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यस खालका कार्यक्रम आयोजना गरिएको पोखरा ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले बताए । उनले बालबालिकाले सरल र सहज तवरले ज्ञान आर्जन गरी उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने अवसर समाजले सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रम संयोजन गरेकी वडा सदस्य अञ्जु केसीले बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा र अवसर दिइन्छ, त्यही अनुरुप भविष्यका नागरिक बन्ने बताइन् । उनले समाज, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय सबैले मिलेर युग सुहाउँदो शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा मन्टेसरी एसोसियसन कास्की अध्यक्ष मीलन केसीले प्रारम्भिक बाल विकास र मन्टेसरी शिक्षाको आवश्यकताबारे प्रकाश पारिन् । उनले संस्थाले पूर्वप्राथमिक तहमा मन्टेसरी शिक्षा जरुरी भएको औंल्याउँदै यसबारे पोखरा महानगरका सबै वडामा अभियान गरिने उल्लेख गरिन् । पोखरा ५ बाट अभियान थालनी गरिएको हो । अध्यक्ष उनले बालबालिकामा प्रभावकारी सिकाइका लागि पाठ्यक्रममै सुधार जरुरी रहेको औंल्याइन् ।
बाल रोग विशेषज्ञ डा. अर्जुन भट्टराईले बालबालिकामा लाग्न सक्ने रोग र सावधानीका उपाय, डाइटिसियन विद्या कायस्थले पौष्टिक आहारबारे सहजीकरण गरेका थिए । अटिजम तालिम केन्द्र, ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिङ् सेन्टरकी सम्झना पराजुलीले पनि प्रशिक्षण दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा पोखरा ५ का वडा सदस्यहरु उज्ज्वल खत्री, हरिमाया विश्वकर्मा लगायतले बोलेका थिए ।